Ny praiminisitra Hon. Nanambara i Alden McLaughlin nandritra ny famelabelaran-kevitra nataon'ny COVID-5 androany (2020 Mey 19) fa nesorina ny tsy fahazoana mivezivezy mafy ao Little Cayman, nanomboka androany hariva. Tonga izany rehefa nanazava ny Lehiben'ny mpitsabo mpitsabo Dr John Lee fa ny 94% amin'ny Little Cayman dia efa namerina valiny ratsy.
Dr Lee koa dia nitatitra vokatra tsara telo sy 221 ratsy.
Ny Lehiben'ny Governora dia namporisika ireo teratany Costa Rican hanararaotra ny sidina famindrana ny zoma 8 may lasa teo. Ny sidina iray hafa mankany Honduras koa dia hatao ny zoma ary mbola hisy ny ezaka bebe kokoa hikarakarana ny dia lavitra mankany amin'ny toerana hafa.
Ary farany, ny minisitry ny fahasalamana dia nanamarika ny fialantsasatra Cinco de Mayo, talohan'ny nilazany fa hisy ny fanambarana tsy ho ela momba ny fiantohana ara-pahasalamana. Notsindriany fa ireo mpihaza izay maniry hampiasa ny fanariam-pako hanary fako maintso dia tsy maintsy mitondra antontan-taratasy marina, ao anatin'izany ny taratasy fanalalahana avy amin'ny fahefana mahefa.
Lehiben'ny mpitsabo Dr John Lee nitatitra:
Ny fizotran'ny dingana "mamoha" dia mamela ny governemanta hanombatombana hatrany ny haavon'ny fandrahonana ary handray fanapahan-kevitra miorina amin'ny risika amin'izany fotoana izany.
COVID-19 dia mety mbola ho ao Grand Cayman; mety hipoitra indray ny aretina ary manomboka hiakatra indray ny isa. Izany no antony isian'ny dingana famohana mihombo.
Manohy mampitombo ny fanandramana izahay, hamantarana raha misy ny COVID-19 eo izao handraisana fanapahan-kevitra tsara.
94% ny mponina Little Cayman dia namerina valim-panadinana ratsy; mbola miandry valiny vitsivitsy sisa isika.
Androany dia misy tranga telo hafa miabo: ny tranga iray dia ny fifandraisan'ny olona iray fantatra tsara, fa ny roa kosa hita fa tsara tamin'ny programa fizahana. Ireo zava-tsoa rehetra ireo dia tao amin'ny Grand Cayman.
224 ny valim-pifidianana notaterina androany, tsara ireo telo ireo, ny 221 ambiny kosa dia ratsy.
48 tamin'ireo valiny ireo dia notsapaina tamin'ny alàlan'ny Hopitaly Dokotera.
Ny totalin'ny tranga ankehitriny dia miisa 78 miabo, miaraka amina soritr'aretina 8; 35 asymptomatika; 2 no niaiky tao amin'ny Health City (ekena noho ny antony hafa) ary 30 no sitrana. Ireo isa ireo dia manohy manatsara ny solaitrabe.
Hofoanana ny tsy fahazoana mivezivezy ao Little Cayman, manomboka amin'ity takariva ity, izany hoe ny ora tsy azo ihodivirana mafy manomboka amin'ny 8 hariva - 5 maraina amin'ny Alatsinainy - Sabotsy ary ny Alahady tontolo andro dia tsy hihatra intsony.
Ny kabinetra dia namoaka andiam-pitsipika vaovao: Ny fisorohana, ny fanaraha-maso ary ny famoretana ny lalàna COVID-19 (2020) izay hanainga ny lalàna farany farany kely avy any Little Cayman.
Raha vantany vao takiana ny lalàna, ny fepetra tokana mifandraika amin'i Little Cayman momba ny tsy fahazoana mivezivezy na ny fialofana dia ny lalàna mifandraika amin'ny halavirana ara-batana na ara-tsosialy. Anisan'izany ny fikojakojana ny enina metatra eo anelanelan'ny olona ao anaty trano amin'ny toerana ampahibemaso ary ny tompona / mpikirakira toerana ho an'ny daholobe dia tsy maintsy mametra ny isan'ny mpanjifa ao anatin'io toerana ho an'ny daholobe io amin'ny fotoana iray ka afaka mihazakazaka enina metatra ny mpanjifa.
Ny sarontava dia adidy amin'ny toerana mihidy sy ampahibemaso ao Little Cayman.
Ny fivezivezena eo amin'ireo nosy dia voafetra ho an'ny mpiasa tena ilaina, araky ny tendren'ny fahefana mahefa. Ho fanampin'izany, ireo mpitsangatsangana hafa mankany Little Cayman dia mila mitrandraka vy mandritra ny 14 andro amin'ny Grand Cayman na Cayman Brac, hosedraina ary hamerina valiny ratsy alohan'ny hamelana azy ireo hiditra ao Little Cayman. Raha tsy izany dia mihidy ny sisin-tany.
Fetin'ny reny ity alahady ity ary rehefa mankalaza ny reny isika dia antenaina fa hahazo fialan-tsasatra mendrika ny reny rehetra amin'ny fanaony isan'andro. Manafatra sakafo any amin'ny trano fisakafoanana dia omena. Ary koa, ny florists dia afaka manolotra amin'ny Fetin'ny Reny satria nahazo famotsorana manokana izy ireo.
AL Thompsons sy Kirk Home Center dia hisokatra amin'ny famoriam-bola amin'ny alalàn'ny fanangonana entana efa voadidy.
Ny valiny tsara eo amin'ny mpiasa eo aloha dia momba izany, saingy tsy ampoizina tanteraka.
RFA Argus dia hita teny am-pitan-dranomasina androany ary ny helikoptera dia nanao fanatanjahan-tena androany niaraka tamin'ny RCIPS, fahitana tena mahavariana. Miala amina morontsiraka hafa izy ireo izao.
Manao izay rehetra azonay atao izahay mba hanampiana amin'ny sidina; bebe kokoa ny tetezana fiaramanidina British Airways no halamina.
Niaiky ny ahiahin'ny olona izy, indrindra ireo manahy ny amin'ny fidirana amin'ireo toeram-pampianarana any UK, Etazonia ary Kanada.
Misy sidina ny zoma 8 mey ho any Costa Rica, misy toerana malalaka. Ny teratany Costa Rican dia tokony hanararaotra izany fotoana izany.
Ny sidina Honduras, amin'ny zoma 8 mey koa, dia hitondra caymanianina vitsivitsy sy mponina maharitra hiverina. Afaka mamandrika ianao hiverina amin'ny sidina manomboka rahampitso.
Fiantsoana roa: ho an'ireo pasitera nandany 72 ora fifadian-kanina sy nivavaka mba hahasoa sy hahasalama ny rehetra.
Ho an'i Sue Winspear, ny Auditor General, ary ireo orinasam-panjakana 28 izay nahatratra ny fe-potoana farany 30 aprily ary nahazo ny hevitry ny kaonty tsy voamarina. Misaotra manokana ny HSA nahatratra io fe-potoana io na eo aza ny fanamby mitranga ankehitriny.
Nankasitraka an'i Frank E. Flowers tamin'ny sorona am-bavaka nataony izy nandritra ny fampahafantarana androany.
Nandinika ny fankalazana ny Cinco de Mayo izy androany.
Miantsoantso amin'ireo mpiasan'ny NAU noho ny fanoloran-tenany ho an'ny olona marefo.
Ny fandrosoana dia natao tamin'ny dinika mitohy momba ny telemedicine, ao anatin'izany ireo mpamatsy fahasalamana sy ny Vaomieran'ny fiantohana fahasalamana Hisy fampandrenesana hatao amin'ity herinandro ity momba ny fiantohana ara-pahasalamana.
Natsangana ny tahiry elektronika iray hanarahana ireo famatsian-danja ilaina amin'ny firenena ary hanomezana vaovao momba ny fotoana maharitra momba ny PPE. Ny lefitry ny masoivoho jeneraly no mitantana azy. Natolotry ny Lehiben'ny Mpitantana ara-bola ao amin'ny HSA ny angona. Haparitaka amin'ireo mpiaramiasa ao anatin'ny roa andro ny fisoratana anarana.
Ny DEH dia te hamporisika ireo mpihaza tany an-tany hafa hanary fako maintso any amin'ny fanariam-pako, saingy ireo olona ireo dia tsy maintsy ekena amin'ny alàlan'ny Curfewtime. Fiara iray fotsiny isaky ny mandeha no avela hiditra amin'ny faritra iva. Ny olona rehetra dia tsy maintsy manome kara-panondro sy antontan-taratasy arakaraka ny fangatahan'ny mpiasa. Ny orinasa dia tsy maintsy ekena ary manana antontan-taratasy mety.
Ny rafitry ny abidia dia mihatra amin'ny fanariana fako ampahibemaso ao amin'ny fanariam-pako.
Tale Jeneralin'ny Nosy Cayman, Danielle Coleman nanambara:
Olona 365 no nitoka-monina tamina tranon'ny governemanta dimy.
Olona 125 no ao amin'ny fotodrafitrasa ankehitriny, ao anatin'izany ny 12 avy amin'ny ekipa fanampiana miaramila avy any UK.
Ny tahan'ny fibodoan'ny Airbnb dia mihombo indray any amin'ny fanjakana izay mifarana ny fanidiana